Wararka Maanta: Talaado, Sept 11, 2012-Jaamacadda Geeska oo xaflad u qabatay 130 arday oo ka qalinjabisay
Munaasibad balaadhan oo loo sameeyey qalinjabinta waxa ka soo qaybgalay madaxweyne ku xigeenka Somaliland, wasiirada waxbarashadda, Maaliyadda, Diinta iyo Awqaafta, marti sharaf iyo ardayda qalinjabisay.
Sidoo kale, waxa xafladda ka soo qaybgalay Sheekh Cabdalla Binu Cali oo ka mid ah culimadda waaweyn ee Islaamka, Isla markaana ah xoghayaha ururka caalamiga ah ee xifdinta quraanka,kaas oo ardayda ugu bushaareeyey in ardayda quraanka dhamaystay uu u diri doono jamaacaddo kale oo quraanka laga barto si ay mastar degree iyo wax ka sareeya u soo qaadan lahaayeen.
Ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Sheekh Almis Sh. Yaxye X. Ibraahim oo ka waramay maraaxiilkii kala duwanaa ee ay jaamacaddu soo martay iyo halka ay maanta taagan tahay, waxaanu si gaar ah u xusay kuuliyadda quraanka kariimka ah lagu baranayo oo uu sheegay in geeska afrika oo dhan ay tahay jaamacadda kaliya ee lagu baran karo xiftinka quraanka kariimka, kaas oo afar sanno ay baranayeen, isagoo uga mahadnaqay sheikh Cabdalla Binu Cali oo ah isagu aasaasay kuuliyadda nasiibna u helay inuu qalinjabintoodda ka soo qaybgallo.
Sidoo kale, laba arday oo ka mid ah ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda ayaa iyaguna madasha ku soo bandhigay aqoontii ay barteen, waxaanay af carabi iyo soomaali ku tuseen dadweynihii xafladda qalinjabinta ka soo qaybgashay muhiimadda aqoontii ay jaamacadda ka kasbadeen.
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Sheekh Khaliil Axmed Cabdilaahi, wasiirka Maaliyadda, Cabdicasiis Maxamed Samaale, Wasiirka waxbarashadda iyo tacliinta sare Marwo:Samsam Cabdi Aadan, wasiir ku xigeenka waxbarashadda Md: Cali Xaamud Jibriil ayaa dhamaantood ardayda qalinjabiyey u rajeeyey mustaqbal fiican iyo inay dadkooda ka qaybqaataan horumarkooda iyo waxay soo barteen inay uga faa’iideeyaan aqoontoodda.
Sheekh Cabdalla Bani Cali oo ah xoghayaha guud ee ururka xifdinta quraanka kariimka ee islaamka oo isna madashaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyey madaxweynaha Somaliland, madaxweyne ku xigeenka, wasiiradda goobta yimid, waxaanu ardayda dhamaystay kuuliyadda quraanka kariim ah u balanqaaday inuu jaamacaddo dibadda ah u diri doono si ay shahaadooyinka labaad u soo qaadan lahaayeen, korna ugu qaadi lahaayeen barashadda quraanka kariimka ah.
Ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka Somaliland, Md: Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici),ayaa ardayda qalinjabiyey ku booriyey inay wadankooda wixii ay barteen uga faa’ideeyaan, isla markaana aanay niyad jabin haddii ay hore shaqo u waayaan, balse ku dadaalaan sidii aqoonta ay barteen uga faa’iidaayaan dadkooda.
Wasaaradda waxbarashadda ayaa sheegtay in dugsiyadda sare ay sanadkan ka bixi doonaan ilaa lix kun oo arday, halka jaamacadaha oo ka kooban 17 jaamacadood ay ka bixi doonaan arday gaadhaysa ilaa saddex kun oo arday, kuwaas oo u baahan buu yidhi in la meeleeyo si aanay suuqa u galin.
Sidoo kale, waxa iyana xaflad balaadhan loo sameeyey 305 arday oo ka qalinjabiyey jaamacadda GOLLIS ee magaaladda Hargeysa, kaas oo xaflad heer sare ah loo sameeyey.